लक्ष्य भन्दा बढि भयो नेपालगञ्जको आन्तरिक आम्दानी
नेपालगञ्ज, साउन १० गते । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले गत आर्थिकबर्ष २०७५/७६ मा १४ करोड बढि आन्तरिक आम्दानी गर्न सफल भएको छ । लक्ष्य भन्दा बढि आम्दानी गर्न सफल भएको प्रमुख प्रशासकीय..
नेपालगञ्जको कारकादौंमा हातमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता
बिहीवार, श्रावन ९, २०७६ साल
नेपालगञ्ज, साउन ९ गते । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १८ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गको सहजताका लागि वडा कार्यालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको..
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको उपहार – विपन्न महिलालाई विना धितो ऋण
नेपालगञ्ज, साउन १० गते । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाल विना धितो ऋण लगानी सुरु गरेको छ । साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति ब्यक्ति २५ हजारदेखि दुई लाख रुपिया सम्म ऋण लगानीका लागि..
मालपोतले बाँकेका स्थानीय तहलाई बुझायो २७ करोड राजश्व
बुद्धबार, श्रावन ८, २०७६ साल
बाँके, साउन ८ गते । बाँकेका स्थानीय तहले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमार्फत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बापत एकबर्षमा करिब २७ करोड रुपिया आम्दानी गरेका छन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका..
नेकपा बाँकेको इन्चार्जमा यादव, सह इन्चार्जमा हारुन, सुवेदी र अथक
नेपालगञ्ज,साउन ३ । नेकपा बाँकेको इन्चार्जमा यादव, सह इन्चार्जमा हारुन, सुवेदी र अथक नेपालगञ्ज, साउन ५ । नेकपा बाँकेको इन्चार्जमा दिनेश यादव चयन हुनुभएको छ ।..
साईकलमा निरौलाका तीन पुस्ता
बाँके,साउन ५ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका सतिश निरौलाको तीन पुस्ता साईकलमा हिड्छन् । निरौलाका पिता घनश्याम निरौला र छोरा सामिप्य निरौला पछिल्लो समय साईकलमै यात्रा गर्छन् । सतिश छोरा सामिप्य सहित शनिबार..
बलात्कारको मुद्दा दिने युवतीसँग होटल बसेका हमाल मृत भेटिए
दाङ, ३ साउन । दाङको तुलसीपुरस्थित मानसरोवर होटलमा एक अनौठो र रहस्यमयी घटना घटेको छ । होटलमा एक युवतीसँगै बसेका बाँकेको कोहलपुर निवासी करीब २७ वर्षका रमेश हमाल झुण्डिएर आत्महत्या..
नेपालगञ्ज कोराको तयारी पुरा
बिहीवार, श्रावन २, २०७६ साल
नेपालगञ्ज,साउन २ । नेपालगञ्जमा साउन ४ गते शनिबार नेपालगञ्ज कोरा–२०१९ को आयोजना गरिदैछ । नेपालगञ्जको धार्मिक बिविधतामा एकताको सन्देश दिने गरि साईक्लिङ्गमा जोड्न कार्यक्रम संचालन गरिएको बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा..
खजुराका अध्यक्ष कक्षपति भन्छन– सम्झौता नेपालकै गौरव हो
बुद्धबार, श्रावन १, २०७६ साल
खजुरा,साउन १ । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले कृषिमा दीगो विकास गरि हरित शहरको सपना पुरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभएको छ । हरित शहर बनाउन उज्वेकिस्तानमा द्धिपक्षीय सम्झौता गरि स्वदेश फर्किएका..
वडा अध्यक्ष दिपक वर्माले मानव धर्म सेवा समितिलाई दिए एक महिनाको तलब
नेपालगञ्ज, असार ३१ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष दिपक वर्माले एक महिनाको तलब नेपाल मानव धर्म सेवा समितिलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार गुरु..
पत्रकारितामा स्वः नियममा जोड
बाँके,असार ३१ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पत्रकारहरुले सामाजिक दायित्व बिर्सन नहुने बताउनु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले मंगलबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोख्रेलले..
विपी चोकमा सटर फुटाउने चोर नाबालक
नेपालगञ्ज, असार ३० । नेपालगञ्जमा भएका श्रृंखलावद्ध चोरीका घटनामा नाबालकहरुको संलग्नता सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले संलग्नमध्येका १६ बर्षिय एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । शनिबारराती मात्रै विपी..
समाजसेवा र तरकारी खेतीले नाम कमाउँदै लालबहादुर
बाँके, असार ३० गते । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका २ सितापुरका लालबहादुर खत्री कृषि विकास बैङ्कका अवकाशप्राप्त शाखा अधिकृत । नेकपा बाँकेको जिल्ला स्तरीय नेता पनि । तर उहाँको पछिल्लो परिचय..
नेपालगञ्ज पूर्ण खोपयुक्त स्थानीय तह
बाँके,असार २९ । नेपालगञ्ज उप–महानगरलाई पूर्ण खोपयुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ । जन्मेदेखि १५ महिना उमेर समुहसम्मका सबै बालबालिकालाई राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार सम्पुर्ण खोप लिएको पाईएपछि आइतबार औपचारिक..
ल्याण्डफिलसाईटमा एक हजार विरुवा रोपियो
नेपालगञ्ज,असार २८ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा शनिबार फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र (ल्याण्डफिल्ड साइड) मा वृहत वृक्षारोपण सम्पन्न भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा न २३ स्थित ल्याण्डफील्ड साइडको क्षेत्रमा एक हजार..
राप्तीमा पानीको सतह खतरा माथी
नेपालगञ्ज, असार २८ । बाँकेमा राप्ती नदीमा पानीको सतह खतरामाथी पुगेको छ । जिल्ला आपतकालिन केन्द्र संचालन केन्द्रका प्रमुख गौरी बुढाथोकीले राप्ती नदीको कुसुममा पानीको सतह खतराभन्दा माथी ५.७ मिटर..
सम्झौता खारेज भएपनि सभाहल र प्रदर्शनीस्थल बन्छ-मन्त्री राई
नेपालगञ्ज, असार २७ । शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ सँगको सम्झौता खारेज भएपनि नेपालगञ्जमा बहुउद्देश्यीय सभाहल र प्रदर्शनी स्थल निर्माण हुने बताउनुभएको छ । संघले..
सम्झौंता रद्द भएको मन्त्री परिषदको निर्णय
बिहीवार, आषाढ २६, २०७६ साल
बाँके,असार २६ । मन्त्री परिषदले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको १० विघा जग्गाको सम्झौता रद्द गरेको छ । मन्त्री परिषदले भोगाधिकारका लागि संघलाई उपलब्ध गराएको जग्गा पुनः..
नेपालगञ्ज वडा प्रहरी कार्यालयमा बस्नेत
बुद्धबार, आषाढ २५, २०७६ साल
नेपालगञ्ज, असार २५ । वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको प्रमुखको रुपमा प्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर बस्नेत बुधबारदेखि हाजिर हुनुभएको छ । जाजरकोट भगवतीका स्थायी बासिन्दा बस्नेत यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा कार्यरत..
बाँकेको सुरक्षाका लागि एसपी वलीका कार्ययोजना
नेपालगञ्ज, असार , २४ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वलीले जिल्लाको एकबर्षे शान्ति सुरक्षाका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा भर्खरै सरुवा भई..
नेपालगञ्ज १८ को सार्वजनिक सुनुवाई
नेपालगञ्ज, असार २५ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १८ ले बुधबार कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधाको प्रभावकारिताको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष दीपक वर्माले कार्यालयबाट भएगरेका..
नेपालगञ्जमा पत्रकारहरुमाथी कुटपिट
नेपालगञ्ज, असार २५ गते । नेपालगञ्जमा क्रियाशिल तीन जना पत्रकारलाई नेपालगञ्जको बाटिका होटलमा दुव्र्यवहार सहित हातपात गरिएको छ । एभिन्यूज टेलिभिजनका ब्यूरो प्रमुख दुर्गा रोकाय, पत्रकार जागेश्वर चौधरी र भिम..
नेपालगञ्ज वडा नम्बर १ को सार्वजनिक सुनुवाई
बाँके,असार २४ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १ ले विषादी रहित तरकारी सेवनका लागि हरेकले करेसा बारी खेती गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिकबर्षमा करेसाबारी खेतीका लागि किसानलाई तरकारीको बिउ लगायतमा..
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा हरित कार्यक्रम संचालनका लागि उज्वेकिस्तानमा सम्झौता
नेपालगञ्ज,असार २४ गते । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा हरित सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि उज्वेकिस्तानको तासकन्दमा मङ्गलबार द्धिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरि कार्यक्रम..
पप्पुले काम नगरेपछि पेश्की रकम फिर्ता
नेपालगञ्ज, असार २३ गते । बाँकेमा निर्माण सुरु भएको क्षेत्रीय कारागारको काम सन्तोषजनक नभएपछि निर्माण कम्पनीबाट पेश्की रकम फिर्ता गरिएको छ । तीन बर्षे ठेक्का सम्झौताको अवधी कात्तिक ४ गते..
बाँकेको डुडुवामा विद्यार्थीलाई झोला वितरण
बाँके, असार २१ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शनिवार डुडुवा गाउँपालिकामा मदरसा, विद्यालय, गुरुकुल र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका विद्यार्थीहरुलाई झोला वितरण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम सिफारिस तथा..
बाँकेको जानकी पनि साक्षर गाउँपालिका भयो
जानकी,असार १७ । बाँकेको जानकी गाउँपालिका पनि साक्षर भएको छ । गाउँपालिकाका ६ वटै वडा साक्षर भएपछि औपचारिक रुपमा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिने भएको छ । मंगलवारदेखि गाउँपालिकाका ६ वटै वडा..
बाँकेको खजुरा भयो साक्षर गाउँपालिका
खजुरा,असार १४ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकालाई शनिबारदेखि साक्षर घोषणा गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिकामा रहेका ८ वटै वडामा १५ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका उमेर समूहका ९६ दशमलव ९९ प्रतिशत मानिस साक्षर..
लोकप्रिय सन्देशको रक्तदान शनिबार
बाँके, असार १३ गते । नेपालगञ्जबाट नियमित प्रकाशित भईरहेको लोकप्रिय सन्देश दैनिकको आयोजनामा शनिबार रक्तदान कार्यक्रम गरिदैछ । लोकप्रियको आयोजनामा गतबर्षदेखि सुरु गरेको त्रैमासिक रक्तदान कार्यक्रम शनिबार पाँचौ पटक रक्तदान..
डुडुवामा वडा अध्यक्षमाथी आक्रमण, उपाध्यक्षका श्रीमान पक्राउ
नेपालगञ्ज, असार १३ गते । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष सगिर खान गम्भिर घाइते हुनुभएको छ । बिहिबारराती घरनजिकै ढुंगाले आक्रमण हुँदा घाइते हुनुभएका खाँको शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा..
Results 1369: You are at page 20 of 46